Fadeexada qaawan ee dul hoganaysa Sheybaarkii Shidaalka oo Shidaal xabag leh dalka ku sii daayey.qalinka A/rahman Fidhinle • Oodweynenews.com Oodweyne News
Fadeexada qaawan ee dul hoganaysa Sheybaarkii Shidaalka oo Shidaal xabag leh dalka ku sii daayey.qalinka A/rahman Fidhinle
dawladApril 30, 2018
Keydka Haamaha Shidaalka ee Berbera waxaa dhismahooda igiriisku bilaabay 6 dii Haamood ee ugu horeeyey
sanadkii 1956, waxaa iyana Dawlada Federaalka ee Ruushku 6 kale ku dartay dhamaadkii sanadkii 1974. Waxaa Mareykanku isna qaar kale dhisay sanadihii 1981- 1982. Waxaana hada shaqeeya Haamo gaadhaya ilaa iyo 8 Haamood oo dib u habeyn kooban lagu sameeyey. Waxaa iyana jira Haamo gaboobay oo aan la dayac tirin iyo Haamo cusub oo ganacsato gaar ihi dhisanayso. Sideedaba Keydka Shidaalka qaranka waa in Amnigiisa iyo faya-dhowrkiisuba sugnaadaa mar kasta waayo waxaa ku xidhan Amniga qaranka ( National Security ) Sidaa daraadeed waa in Xukuumadu qacanteeda ku soo celisaa.
Keydka Haamaha Shidaalka oo ahaa Hanti qaran oo ma guuraan ah ayaa 15 kii Octobar- 2015 sife aan sharciga iyo Dastuurka qaranka waafaqsaneyn loogu wareejiyey shaqsiyaad gaar ah iyo Shirkado macaash doon ah (Profit making company) Shirkadahaas oo kula sii shuraakoobay oo sheerer siiyey xubno gurada markaa ugu jiray Xukuumadii Siilaanyo ee waqtigeedii uu dhamaaday . Waxaa arintan wareejinta Haamaha shidaalka cod dheer oo aqbilayad ah ku laalay oo ku diiday Golaha Baarlamaanka ee Somaliland. Wareejintaasi waxay shacabka JSL u cadaysay in xukuumada Somaliland ay qaadacday sharcigii fartaaga badan ahaa ee Baarlamaanku ku laalay Wareejinta Keydka Haamaha Shidaalka ee Berbera.
Shirkadaha Keydka Haamaha Shidaalka ee Qaranka lagu wareejiyey waxay ka kooban yihiin 11 shirkadood oo kala ah.1– Shirkada Som Petroleum, 2– Som Oil, 3– Red Sea, 4-Ream Petroleum, 5- Ali Waraabe Company, 6-Harbi Petroleum. 7- Indho- Birta. 8-Muse Dalab, 9– Hass Company.10– Liiban Petroleum, 11– Deero Petroleum. Waxaa laga dhawaajiyey in 9 ka mid ah shirkadahaasi uun ay shidaalka dalka keenaan 5-ta kalena ay dulman yihiin oo ka sii iibsadaan Shidaalka shirkadaha keena.
Wareejintii Keydka Haamaha shidaalka qaranka lagu wareejiyey shirkadahan kor ku taxan ee macaashdoonka ahi wuxuu baalmarsanaa Xeerka iyo xeegaanada maalgashiga ee Somaliland Xeer/No/ 29/ 2004, Qodobkiisa 5-aad iyo Qodobkiisa 13-aad. Xeerkani wuxuu awood buuxda siinayaa 9-ka xubnood ee gudida maalgashiga Somaliland (Foreign investment board ) taas oo ay aheyd in ay doorkooda shaqo ka gutaan oo sife xalaal ah mujtamaca ugu soo bandhigaan ( fair competition ) hadii laga maarmi waayey in la wareejiyo keydka Haamaha shidaalka ee qaranka taasina may dhicin.
Baadhis qoto dheer oo lagu sameeyey taariikhda fayo dhowrka iyo tayada shidaalka Somaliland soo gala ayaa laysku raacay in uu had iyo jeer shidaal xumi uu dalka soo galo, hadana in aan 3-dii sanadood ee la soo dhaafay aan Markab keliya oo sida Shidaal xun aan la xakameyn oo aan dib loogu celin. Waxaa shidaal xumaaday oo dib loo celiyey Somaliland ugu danbaysay sanadkii 2013 kadib markii sadex Markab dib loogu celiyey shidaalkii xumaa eey wadeen iyadoo waqtigaana ay Keydka Haamaha Shidaalka Berbera uu gacanta Dawlada ku jiray oo dadaal badani jiray in kasta oo aanay marka haysan qalab fayo dhowr (sheybaar ) oo hagaagsan oo lagu baadho hadana way la tacaali jireen si shidaalka dalka soo gala uu ahaado mid wanaagsan. Hadaba Maanta oo Haamaha uu ku rakiban yahay (shaybaar) ama faya dhowr casri ah oo lagu soo iibiyey sanadkii 2015 lacag dhan $15.Million dollar Maxaa looga shaqaysiin waayey sheybaarkaas ee Shidaalka xun dalka loogu sii daayey? Waxaa arintaasi ummaddu u aragtaa ” Waa werdi xeeladi daba taalo“.
Waxaa Sharciga Keyda Haamaha Shidaalka ee dalka u yaalaa uu dhigayaa in marka Shidaalka Haamaha lagu shubo ay Masuuliyada shidaalku markiiba ku soo wareegayso Dawlada Somaliland sidaa daraadeed ay dhibaatooyinkaa uu keenay shidaalka xun ee xabagta leh ay masuuliyadeedu dowlada u taalo ayna haboon tahay in ay kula xisaabtanto oo toos u abaarto shirkadaha shidaalka xun dalka keenay si ay talaabo sharciga waafaqsan uga qaado.
1-Xukuumada Somaliland iyo Hayadeeda fayo dhowrka qaranka waxay ku fashilmeen in ay kantaroolaan oo ay awoodeeda oo buuxda dul saaraan lana wareegaan Sheybaarkaa fadhiidhka noqday ee yaala Xarunta Keydka shidaalka ee Berbera, Sheybaarkaasi wuxuu ku fashilmay hubinta tayada Shidaalka ee dalka soo galay waxaana looga fadhiyaa in uu bixiyo magdhowga gaadiidkii shidaalka xabagta leh ku xumaaday oo dhan.
2-Waxaa Fadeexad qaawan ah in aanay Hayada Faya dhowrka ee Somaliland aanay haysan ama gaar u laheyn sheybaar u gaar ah oo lagu baadho fayo qabka Shidaalka dalka soo gala. Si ay ula socoto tayada shidaalka dalka soo galaa in uu yahay mid ku haboon in la isticmaalo (fit for use).
3- Waxaa nusqaan ku ah Qaranka Somaliland ee qaan gaadhka dhaafay in Wasaaradiisa Ganacasiga, Wershadaha iyo Dalxiisku aanay laheyn awood dhaqaale oo ay iyagu ku soo iibsadaan Shidaal wanaagsan oo dalka lagu is ticmaalo si ay iyagu uga sii iibiyaan Shirkadaha Shidaalka iibiya si dalku shidaal lagu kalsoon yahay oo la shaybaadhay uu u helo sicirka shidaalkuna uu u fadhiisto.
Gunaanad: Sheybaarna wuu jiraa- Shidaal xumina dalka wuu soo galay laba is qabanaaya maaha.Sidaa daraadeed Sheybaarka Faya dhowrka ee ku rakiban Xarunta Keydka Haamaha Shidaalka ee Berbera waxa waajib ku ah in uu lahaado Caymis (insurance ) sugan si uu isaga bixiyo magdhowga khasaare ee uu geystay shidaalkii xabagta lahaa ee uu dalka ku sii daayey..